पद नायव सुब्बाः २९ वर्षे जागिर अवधिमा १९ करोड कमाई, कहाँबाट आयो यत्रो रकम ? -
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०६:१५ November 28, 2019 उधाेगिLeaveaComment on पद नायव सुब्बाः २९ वर्षे जागिर अवधिमा १९ करोड कमाई, कहाँबाट आयो यत्रो रकम ?
सरकारी जागिर खाएर भन्ने नै हो भने महिना दिन पनि चलाउन गाह्रो छ । अझ विशेष गरि त सामान्य पदमा भएकोलाई धेरै नै गाह्रो छ । तर, एक यस्तो व्यक्ती छन् जो नायब सुब्बा पदमा रहेर पनि कुल १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कमाएको भेटिएको छ । यती मात्र नभई राजधानीको सुन्धारा र कलंकीमा घरजग्गा पनि रहेको छ । उनकै सर्लाहीसहित तराईका जिल्लाहरूमा घरजग्गा र सम्पत्ति साथै आफ्नो कार्यालयका सहयोगीका सासूका नाममा समेत जग्गा खरिद ।
२९ वर्षअघि खरिदारका रूपमा सरकारी जागिर सुरु गरेका मदनकुमार गुप्ताको सम्पत्ति विवरण हो यो । जागिर अवधिमा उनले २७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको मापदण्ड हेर्ने हो भने त्यो तलबबाट १९ लाख ५५ हजार रुपैयाँबाहेक एक पैसा पनि बच्दैन । १९ लाख रुपैयाँ कमाएको व्यक्तिसँग १९ औं करोड रुपैयाँ कसरी आयो ?
‘एउटा कार्यालयमा हुँदा हामीले परीक्षण गरेको आठ महिनाको अवधिमा उनले ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले गत जेठ ३ गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे भने, ‘नक्कली रसिदप्याड छाप्ने, जग्गापास गर्नेहरूसँग नगद लिने र सरकारी खातामा नबुझाउने गरेको भेटियो । केही फाइल हेर्दै करोडौंको अनियमितता गरेको देखिन्छ, अरूमा के हाल होला ?’ ०७५ साउनदेखि फागुन १२ गतेसम्म मात्रै अख्तियारले गुप्ताको नेतृत्वमा साढे ४ करोड अनियमितता भएको भेट्टाएको थियो ।
बारुद कम्पनी खोलेर ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउँदै सेना !
अम्बानीको ‘रिलायन्स इण्डष्ट्रिज’ बन्यो भारतको पहिलो कम्पनी
३१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा डीआईजी शाह भ्रष्टाचारमा मुछिए
२१ पुष २०७६, सोमबार ०६:११ January 6, 2020 उधाेगि
आज – ०९ मंसिर २०७६ सोमवार को राशिफल
८ मंसिर २०७६, आईतवार २३:४७ November 24, 2019 उधाेगि
चन्द्र ढकालः बैंकको जागिरेदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्षसम्म
१६ मंसिर २०७६, सोमबार ०५:०७ December 2, 2019 उधाेगि